Enterprise News – GlobalNet
photo: VMware The United States may increase its investments in energy, telecommunications, tourism, and natural gas production sectors followingadiscussion to cooperate in Myanmar beyond the COVID-19 pandemic, said U Maung Maung Lay, chair of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI). The development
Video-First Unified Communications တွင် ထိပ်တန်းနေရာကိုရရှိထားသော Zoom Video Communications, INCနှင့် နိုင်ငံ့ဦးဆောင်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သော Global Technology Company (GlobalNet) တို့ပူးပေါင်းကာ COVID 19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နေစဉ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာ့ပညာရေး ကဏ္ဍစုံ အတွက် ခေတ်မီ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကို အလျင်အမြန် နေသားတကျ ဖြစ်လာ စေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်။ ။ Global Technology Company (GlobalNet) နိုင်ငံ့ဦးဆောင်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Zoom Video Communications, Inc ၏ Zoom (NASDAQ: ZM)
The EuroCham Myanmar Digital Initiative held its Official Launch Event, gathering online more than 200 representatives from the Myanmar-EU business community. In the current difficult context for business, the event called “An Operating Manual to Seize Digital Opportunities” put an emphasis on tools offered by digital for the transformation of
MYANMAR’S INTERNET performance ranking jump up3spots to 118th out of 174 on Global Internet Performance Index ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာ့အင်တနက်မြန်နှုန်း နိုင်ငံများစာရင်းတွင် အဆင့် သုံးဆင့် မြှင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ယခင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့အင်တာနက်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၁၂၁ ဆင့် (121th) ရှိပြီး ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် 5BB Broadband ၏ အမြန်ဆုံးဆုတံဆိပ်နှင့်အတူ အဆင့်
❤️ မြန်မာ့အမြန်ဆုံး 5BB Broadband Grand Opening New Showroom Ceremony ❤️
❤️ မြန်မာ့အမြန်ဆုံး #5BB Broadband Grand Opening New Showroom Ceremony ❤️ မြန်မာ့အမြန်ဆုံး #5BB_Broadband ရဲ့ ဝေဇယန္တာ Showroom ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့ ဩဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်အချို့ နှင့်အတူ အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ #5BB ရဲ့ ဝေဇယန္တာ Showroom ဖွင့်လှစ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရတောင့်ရခဲ အမိုက်စား Promotion များ ကို မြို့နယ် ( ၆ ) မြို့နယ်မှ Customer များအတွက် ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ဝေဇယန္တာ Showroom အသစ်ကြီးတွင် လာရောက် ဝယ်ယူသူများအတွက် 50%
Global Technology Group (GTG) ဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဆု 🏆 “Employee’s Choice – Best Company to work in Myanmar”🎉🎉 🥰🥰 GTG အားဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဆု 🏆 “Employee’s Choice – Best Company to work in Myanmar” အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် အထူးပင် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ 💁💁ဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သောဆု ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် စစ်တမ်းများကို ရွေးချယ်ဖြေကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ထိုစစ်တမ်းကောက်ချက်များကို JobNet
ရန်ကုန်၊မြန်မာ၊သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် – ဆက်သွယ်ရေး ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နေသည့် Global Technology Group သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြန်ဆန် အတိကျဆုံး Broadband ကွန်ရက်အဖြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အင်တာနက် စမ်းသပ် အကဲဖြတ်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Ookla ၏ အသိအမှတ် ပြုခြင်းခံရသည်။ 5BB Broadband သည်အမြန်နှုန်းရမှတ် ၂၁.၅၈ ရရှိပြီးထိပ်တန်း ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်း ၅၇.၉၇ Mbps နှင့် အမြန်ဆုံး upload အမြန်နှုန်း ၄၃.၆၁ Mbps အထိ မြန်ဆန်မှုနှုန်းအား ကောင်းခဲ့သည်။ Fixed ကွန်ရက်များအတွက်ပေးအပ်သော ဤဆုသည် ၁,၅၃၉,၄၀၆ ယောက်သော သုံးစွဲသူများ၏ မြန်မာပြည်တစ်ဝန်း